We Fight We Win. -- " More than Media ": မေဒေးနေ့ကို အလုပ်မပိတ်ဘဲ အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်း
မေဒေးနေ့ကို အလုပ်မပိတ်ဘဲ အဓမ္မအလုပ်စေခိုင်း
မေဒေးနေ့တွင် အလုပ်သမားတွေက ရုံးပိတ်စေ့ချင်သော်လည်း Drethilem ကုမ္ပ္ပဏီ Anlene နို့မှုန့် (လူကြီးနို့မှုန့်) ဌာနမှ မန်နေဂျာ ဒေါ်သဉ္ဇာဝင့် မှ ပိတ်မပေးဘဲ အဓမ္မစေခိုင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေ ဆက်သွယ်ပြောကြားလာလို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ မေဒေးနေ့ကို အလုပ်ဆင်းခိုင်းခဲ့ပေးမယ့် ထိုရက်လုပ်ခနှစ်ဆ မရ၊ အိုတီကြေး မရ၊ ပါဆင့်နိမ့်မရဘဲ အလုပ်သမားတွေ စိတ်မပါဘဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတယ်။
မေဒေးနေ့ အခမ်းအနားများကို တက်ရောက်ချင်ပေမယ့် ကုမ္ပ္ပဏီ မန်နေဂျာမှ ခွင့်မပြုတဲ့အတွက် အလုပ်ဆင်းခဲ့ကြရ တယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ စင်္ကာပူပိုင်ဖြစ်ပြီး မန်နေဂျာမှာ မြန်မာအမျိုးသမီး ဖြစ်သည်ဟု အလုပ်သမားတွေ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
Do Want to know dogs in Malaysia,beating girls? r they dead or alive?
Do want to know dogs at Malaysia who beaten girls. R they dead or alive?